महेन्द्र राजमार्गको दाउन्नेमा पहिरोले १२ घण्टादेखि राजमार्ग अवरुद्ध - समाचार - कान्तिपुर समाचार
महेन्द्र राजमार्गको दाउन्नेमा पहिरोले १२ घण्टादेखि राजमार्ग अवरुद्ध
नवलपरासी — महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको दाउन्नेमा गएको पहिरोले पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको यातायात १२ घण्टादेखि अवरुद्ध भएको छ ।
शुक्रबार राति ११ बजेदेखि झरीले दाउन्नेको एक दर्जन स्थानमा गएको पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो । पहिरोका कारण पूर्व-पश्चिम हिँडेका सयौं सवारी साधन दाउन्नेमा अलपत्र परेका छन् । डिएसपी राजेश थापाका अनुसार दाउन्ने पहाडको बर्दघाट र दुम्किवास खण्डका ठाउँठाउँमा गएको पहिरो हटाउन सडक विभागका कर्मचारी र डोजर प्रयोग गरिए पनि सफल हुन सकेको छैन ।
निजी डोजर समेत प्रयोग गरेर पहिरो पन्छाउने प्रयास भइरहेको र वर्षात् नभए दिउँसोसम्म एकतर्फी सडक सञ्चालनमा आउन सक्ने उनले जानकारी दिए ।
पहिरोका कारण महेन्द्र राजमार्ग हुँदै पूर्व-पश्चिम हिँडेका सयौं यात्रु बर्दघाट, सुनवल खण्ड र दुम्किवास खण्डमा प्रहरीले रोकेको छ । यात्रुको सुरक्षाका लागि ती गाडी प्रहरीले रोकेको हो ।
प्रकाशित : श्रावण २८, २०७४ ०८:२४
‘स्वदेशी शिक्षा सबैको इच्छा’
काठमाडौं — यो मेला किन ? ‘स्वदेशी शिक्षा सबैको इच्छा’ हाम्रो मूल नारा रहेको छ । यसको अर्थ स्वदेशमा रहेका युनिभर्सिटी र त्यसअन्तर्गत कलेजहरूको विश्वसनियता, गुणस्तरलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिने शैक्षिक मेला हो । प्लस टु पास गरेर ब्याचलर्स पढ्ने तयारीमा रहेका, त्यसैगरी ब्याचलर्स सकेर मास्टर्सको भर्ना हुन गइरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी मेलाको आयोजना गरिएको हो ।
यो मेला किन ?
‘स्वदेशी शिक्षा सबैको इच्छा’ हाम्रो मूल नारा रहेको छ । यसको अर्थ स्वदेशमा रहेका युनिभर्सिटी र त्यसअन्तर्गत कलेजहरूको विश्वसनियता, गुणस्तरलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिने शैक्षिक मेला हो । प्लस टु पास गरेर ब्याचलर्स पढ्ने तयारीमा रहेका, त्यसैगरी ब्याचलर्स सकेर मास्टर्सको भर्ना हुन गइरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी मेलाको आयोजना गरिएको हो ।
खास उद्देश्य भनेको उच्च शिक्षा पढ्नका लागि बिदेसिनु पर्दैन । स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय कोर्सहरू पढाइन्छ । विश्वभरिका झन्डै दुई सय देशमा पढाइने कोर्स र विषयबारेमा जानकारी दिएर यहीं पढ्न उपयुक्त छ भनेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई विश्वास दिलाउनु हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विदेश पलायन रोक्ने हो ।
यसपालि कुन–कुन युनिभर्सिटी र कलेजहरू सहभागी छन् ?
टीयू, केयू, पोखरा र पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी र त्यसअन्तर्गतका कलेजहरूको सहभागिता छ । त्यसैगरी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमै चलाइएका कलेजहरूसमेत सहभागी छन् ।
खासगरी कुन फयाकल्टी र विषयलाई बढी केन्द्रित छ ?
खासगरी म्यानेजमेन्ट, आईटी र हयुमानिटिज गरी यी तीनवटालाई फोकस गरिएको छ । म्यानेजमेन्टभित्र बीबीए, एमबीए, बीएचएम, बीएचईएम, बीटीटीएमलगायत पर्छन् । त्यस्तै, आईटीमा बीआईटी, बीआईएम, बीएस्सी सीएसआईटी पर्छन् । हयुमानिटिजमा ब्याचर्ल इन डेभलपमेन्ट स्टडिज, बीएसडब्लू, बीओएसएस (ब्यालर्स अफ सोसल साइन्स) लगायत छन् । यी सबै कोर्स ब्रान्डेड हुन् । विश्वभरि जहाँ गए पनि उस्तै हुन्छ । दुई सयभन्दा बढी देशको कार्यक्रम हो । नेपालमा मात्रै डिजाइन गरिएको कोर्स होइन ।
शैक्षिक मेलाबाट कस्तो अपेक्षा राखिएको छ ?
उद्देश्य अहिलेको युवा शक्ति प्लस टु पास गरेका, ब्याचलर्स पास गरेका युवा शक्तिलाई देशमै उत्पादनशील बनाउने हो । स्वदेशमै पढ्यो भने भोलि देश बनाउने सपना देख्छ । पाँच वर्षपछि, दस वर्षपछि आ–आफ्नो क्षेत्रमा जानका लागि सहज हुन्छ । देशको विकास गर्नका यो युवाशक्ति चाहिन्छ । व्यक्तिगत सफलता खोज्ने अनि देशकै निम्ति योजना बनाउँछ । इन्डिया बनेको कारण युवाको संख्या बढी भएर हो । चीन बनेको कारण युवाशक्ति बढी भएकोले हो । नेपालमा पनि जनसंख्या युवाको बढी छ । तर, विदेश पलायन बढ्दो छ । भोलि फर्केर आउने कम छ । अहिले नै कम फर्किदै छन् । देशभित्र रहेर केही गर्नुपर्छ । गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने भावनाका विकास गराउनुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।